China breeki maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala ndị njem na ndị na-ebubata ya | SANTA
Ụgbọ ala ụfọdụ ka nwere breeki drum sistemu na-arụ ọrụ breeki drumna breeki akpụkpọ ụkwụ. breeki Santa nwere ike ịnye ịgbà breeki maka ụdị ụgbọ ala niile. A na-achịkwa ihe nke ọma yana ịgbà breeki na-edozi nke ọma iji zere ịma jijiji.
Kedu ka breeki drum si arụ ọrụ?
Akpụkpọ ụkwụ breeki dabara na akwa breeki (ihe mgbakasị ahụ) nke na-akụgide ụrọ si n'ime iji mepụta ike breeki (na-ebelata na nkwụsị) n'ime ụgbụ ahụ.
Site na usoro a, a na-enwe esemokwu site n'ịkụnye ihe mkpuchi breeki n'ime ime nke drum. Esemokwu a na-atụgharị ike nke kinetic ka ọ bụrụ ike ọkụ. Ntugharị ịgbà na-enyere aka iji ike pịnye akpụkpọ ụkwụ na mkpuchi megide drum, na-enye ike breeki ka elu ma e jiri ya tụnyere brek diski. N'aka nke ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa ịmepụta ihe ndị ahụ ka ọkụ si na ike ọkụ na-ekpochapụ nke ọma n'ime ikuku.
Aha ngwaahịa Ịgba breeki maka ụdị ụgbọ ala niile
Aha ndị ọzọ breeki ịgbà
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, Santa breeki nwere ndị ahịa gburugburu ụwa. Iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ, anyị guzobe onye nnọchi anya ahịa na Germany, Dubai, Mexico, na South America. Santa bake nwekwara ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na USA na Hongkong.
Ahụmahụ mmepụta breeki afọ 15
Na-elekwasị anya na diski breeki na drum, dabere n'ịdị mma
Nke gara aga: Ịgba breeki nwere ọgwụgwọ nguzozi
Osote: Akpụkpọ ụkwụ breeki na-enweghị mkpọtụ, enweghị ịma jijiji
ịgbà breeki akpaaka
brek drum bpw
breeki drum volvo
hino breeki drum
jac breeki drum
azụ breeki drum
ịgbà breeki gwongworo
drum breeki ụgbọala na-adọkpụ
drọm breeki gwongworo
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị Pads breeki na-arụ ọrụ, breeki drum volvo, mpe mpe akwa breeki akpaaka, Ụgbọ ala breeki, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki,